Iibso taageerayaasha Instagram maalinlaha ah
Bilaash Instagram jecel
La hel koboc degdeg ah oo la hiigsanayo oo leh taageereyaasha Instagram iyo kuwa jecel ee bilaashka ah maanta!
U adeegso adeegyadeena bartilmaameed, tayo sare, free Instagram raacsan iyo Instagram-ka jecel! Dhaqdhaqaaq aan xadidnayn si loo sii wado helitaanka korriinka maalinlaha ah. Sahan ma jiro!
Kusoo Biir Bogaga 'Instagram' iyo Jaanqaadyada oo bilaash ah or Soo iibso Instagram Followers
Talaabooyin Fudud oo Lagu Shaqeeyo Adeegyadeena Bilaashka ah
Way fududahay in la bartilmaameedsado, tayo sare leh, free Instagram raacsan or Instagram jecel yahay ka shabakaddeena! Geedi socodku wuxuu qaadanayaa 2 daqiiqo oo kaliya si loo dhaqaajiyo qorshe oo waa kuwan tillaabooyinka:
Ku dadaal Qorshaha Bilaashka ah
Raac Muuqaalo Xiisaha Leh
~ 2 Daqiiqo Kadib, Waad Dhaaftay!
Soo hel Taageerayaal bilaash ah!
15 Taageerayaal Maalinle ah ($20.00) 30 Taageerayaal Maalinle ah ($40.00) 60 Taageerayaal Maalinle ah ($80.00)
Gain 15 Bartilmaameedka la beegsaday
Bixiya saacad walba 24
Bixiyaasha Xilliyada 24 gudahooda
Waxaad Shaqeysaa 1x Saacad kasta 24
25 Jecel Boostiiba ($20) 50 Jecel Boostiiba ($40) 100 Jecel Boostiiba ($80) 200 Jecel Boostiiba ($160) 500 Jecel Boostiiba ($350) 1000 Jecel Boostiiba ($700)
Gain 25 Waad jeceli kartaa Post
7 Sababood Waa Inaad Ku Fiirsato Inaad Gaadho Soo Socotada Instagram
Ka war helida barta Instagram waxay noqon kartaa mid ka mid ah ciyaartoygii beddelay ee halkaas ka jiray si ay uga caawiso meheraddaada inay joojiso. Helitaanka kuwa raacsan iyo kuwa jecel waxay ka caawisaa faafinta wacyigaaga sumcaddaada iyo gaarista macaamiisha mustaqbalka. Bogga caanka ah ee wadaagista sawirka ayaa ku faanta in ka badan 1 bilyan adeegsadayaal, in kabadan 500 milyan oo isticmaaleyaal firfircoon maalin kasta. Qof kasta iyo qof walba waxay ku jiraan barta Instagram, iyo dadkaas oo dhan oo halkaas jooga oo wadaagaya oo ka faalloobaya qoraallada iyo sawirrada, waxaad u maleyneysaa in helitaanka kuwa raacsan ay noqon doonaan gabal keeg ah. Laakiin, sida waxyaabo badan oo nolosha ka mid ah, dhisidda jiritaanka warbaahin bulsho oo si wanaagsan loo habeeyey waxay qaadataa dulqaad iyo go'aan qaadasho. Xitaa khubaradu waxay leeyihiin waa shaqo adag. Sida uu sheegayo Khabiirka Kobaca Warbaahinta Bulshada, Talia Koren, dhisidda caafimaad caafimaad leh iyadoo la raacayo aalad kasta oo warbaahinta bulshada ah waa ballanqaad weyn, iyo helitaanka kuwa jecel qaaliga ah iyo kuwa raacsan waxay qaadataa istiraatiijiyad, xirfad, iyo waqti badan.
Mr. Insta Waa Xalkaaga Bilaashka ah
Waxaa jira shirkado halkaas jooga oo kaa caawin kara yareynta qaar ka mid ah cadaadiska horumarinta joogitaankaaga Instagram, sidayada oo kale, Mudane Insta! Xaqiiqdii, waxaan si dhab ah uga caawinaynaa macaamiisheenna adoo siinaya kuwa raacsan barta Instagram bilaash! Taasi waa bilaash! Waxyaabaha intaa la eg waxaad ka fikiri kartaa, waa maxay qabashada?
Runtii waa wax fudud oo waxay qaadataa dhawr daqiiqo oo wakhtigaaga ah. Si fudud gal, dhaqaaji qorshaha bilaashka ah waxaana lagu soo bandhigi doonaa profiles Instagram si aad u raacdo. Boggan Instagram-ka waxa lagu bartilmaameedsan doonaa danahaaga oo waad ka boodi kartaa mid kasta oo aadan rabin inaad raacdo. Kadib markaad raacdo tirada profiles ee loo baahan yahay, qorshahaaga waa la hawlgelin doonaa. Waxaan ku soo gudbin doonaa taageerayaasha Instagram akoonkaaga 48 saacadood gudahood, wax su'aalo ah lama weydiin. Waxa ugu wanagsan, waxaad ku celin kartaa talaabadan 48 saacadoodba mar. Tani waxay ka dhigan tahay inaad sii wadi karto korinta akoonkaaga weligeed!
Waxaan xitaa ikhtiyaar u leenahay macaamiisheena ka sokow free Instagram raacsan. Haddii koontadaadu u baahan tahay hawlgelin, waad sameyn kartaa soo iibsato barta Instagram, kooxaha, comments, iyo qaar kaloo badan. Ama, ku biir mid ka mid ah qorshayaashayada isdiiwaangelinta bilaha ah. Qorshayaashani waxay soo gudbiyaan taageereyaal khuseeya ama dhajinta jecel boggaaga maalin kasta; dhamaantood waxa lagu badalaa khidmad yar oo bishii ah.
Ma la yaaban tahay in iibsashada ama helitaanka caawimada bilaashka ah ay kugu habboon tahay? Hadday sidaas tahay, sii akhri 7-da sababood ee ugu sarreeya sababta helista taageerayaal badan ay tahay tallaabada ugu fiican ee ganacsigaaga iyo astaantaada.
Waxaad dooneysaa inaad dhisato sharciyeynta shirkaddaada
Iyada oo ahmiyada sii kordhaysa ee warbaahinta bulshada ee ganacsiyada, waxqabadka koontada ayaa noqotay go aan go'aan qaadasho ah oo ku saabsan bal in macaamiisha ay rabaan inay ganacsi idin la yeeshaan. Haddii astaantaada ganacsi ay leedahay tiro badan oo raacsan, waxay u muuqan doontaa macaamiisha in shirkadaadu ay inbadan jirtay wayna ogtahay waxay sameyneyso. Shirkadaha leh tiro yar oo raacsan iyo kaqeybgal hoose ayaa umuuqda kuwo aan khibrad laheyn. Sidaas darteed, macaamiisha ayaa go'aansan kara inay diidaan iibsashada alaabadaada. Helitaanka kuwa raacsan oo dheeraad ah waxay ka dhigeysaa astaantaada muuqaal ahaan mid xirfad leh waxayna khiyaameysaa fursadahaaga helitaanka macaamiisha dhabta ah.
Waxaad ku cusub tahay warbaahinta bulshada iyo profile-kaaga ayaa isticmaali kara wiishka
Waa runta murugada leh in inta badan profile-yada cusub ee Instagram ay ku adag tahay in la dareemo ka hor inta aysan awoodin inay helaan taageerayaal muhiim ah. Xirfadaha qaarkood, sida warshadaha moodada, moodooyinka xitaa looma tixgalin doono shaqaaleysiin haddii aysan haysan tiro go'an oo raacsan. Sababta ayaa ah, inta badan calaamaduhu waxay rabaan inay shaqaaleeyaan dad si fiican loogu yaqaan goobtooda shaqada noocaas ah. Tani waxay gelin kartaa moodooyinka soo-socda iyo kuwa soo socda khasaare aad u daran marka la isku dayayo in la ogaado.
Iyadoo la rajeynayo in warshadahaagu aysan ahayn mid adag, xaqiiqda arrintu waa xisaabaadyo ganacsi oo cusub, iyo urur ahaan, ganacsiyada cusub, waxay leeyihiin waqti adag in la arko. Waa khiyaamo yar oo la yaqaan, laakiin shirkado badan ayaa horay u iibsaday taageerayaasha Instagram. Taasi waa sax, makhaayadaha, ciyaartoyda, noocyada dharka, iyo xitaa siyaasiyiintu waxay dhammaan ku iibsadeen kuwa raacsan xisaabtooda waxayna arkeen natiijooyin cajiib ah. Markaad ku bixiso qayb yar oo ka mid ah miisaaniyadaada suuq-geynta ee taageerayaasha Instagram, waxaad si qurux badan u samaynaysaa wax la mid ah bixinta lacag bixinta si kor loogu qaado boostada Instagram. Farqiga u dhexeeya ayaa ah, lacagtaadu aad ayay u sii fogaanaysaa markaad iibsato kuwa raacsan sababtoo ah waxaa hubaal ah inaad hesho qaddarka aad iibsatay. Markaad xoojiso boostada, waxa ugu fiican ee aad sameyn karto waa rajada inaad gaarto dhowr boqol oo taageerayaal ah, natiijooyinkana lama dammaanad qaadayo.
Waxaad dooneysaa in lagu arko dhagaystayaasha macaamiisha waaweyn
Ka fakar habka aad u xukumi karto profile-ka saaxiibka oo aan lahayn taageerayaal badan, ama boostada aan lahayn hawlgelin badan. Way adkaan kartaa in la qirto, laakiin ugu dambeyntii, dhammaanteen waxaan u maleyneynaa isku mid markaan aragno qoraaladan; qofkani waa mid aan la jeclayn. Fikirkani wuxuu ka yimid dabeecadda aadamiga ee loo yaqaan "caddaynta bulshada." Marka loo eego caddaynta bulsheed, waxaynu u janjeernaa inaynu qiimayno sida loo dhaqmo iyo waxa la jeclaysto iyadoo lagu salaynayo sida dadka kale u dhaqmayaan, iyo waxay jecel yihiin. Waxaad ku arki kartaa tan ficil ahaan goob kasta oo warbaahinta bulshada ah.
Waa sida qoraaladu u awoodaan inay galaan fayras. Qof ayaa arka qoraal xiiso leh, si ay ula wadaagaan taageerayaashooda. Taageerayaashoodu waxay arkaan in qofku uu ku riyaaqay boostada sababtoo ah way wadaagaan, sidaas darteed taageerayaashooda waxay bilaabaan inay sidoo kale wadaagaan. Instgram-ka waxa uu jecelyahay qoraalada ka soo baxa akoonnada leh hawlgelinta sare oo leh tiro badan oo raacsan. Markaa maadaama qoraaladaadu ay ku soo jiidanayaan jeceylka iyo faallooyinka, haddii akoonkaaga uu leeyahay taageerayaal badan, waxaad u muuqan doontaa mid sare oo sareeysa raadinta. Wax yar ka dib hawlgelinta waxay bilaabmaysaa kubbad baraf, muddo dheer ka horna, tiro dad ah ayaa arkay boostadaada. Markaad iibsato taageerayaasha Instagram, waxaad qaadaysaa tillaabada ugu horreysa xagga fayraska, oo ay ku arkaan kumanaan, ama xitaa malaayiin macaamiil ah.
Waxaad aad u mashquulsan tahay hawlaha kale ee ganacsiga
Maamulida ganacsigu waxay qaadataa shaqo adag iyo tamar badan. Hawlo aan tiro lahayn ayaa loo baahan yahay in la dhameeyo si ay u sii wadaan hawlgallada si habsami leh, laakiin waxaa jira saacado badan oo maalintiiba ah. Waxaan horay uga wada hadalnay xaddiga waqtiga loo baahan yahay in la dhiso Instagram caafimaad kadib, fursadaha waa, waxaad haysataa liis dharka oo dhan ee kale, laga yaabo in ka sii muhiimsan, hawlaha ganacsi ee u baahan in la sameeyo. Waxaad kireysan kartaa maamulaha warbaahinta bulshada si aad u daryeesho astaantaada, laakiin taasi waxay ka dhigan tahay in la kordhiyo $ 50,000 sanadkiiba macaashkooda iyo manfacyada. Haddii aad iibsato Instagram raacsan tahay, waxaad iska badbaadineysaa lacagta iyo ilaha ay qaadanayso si aad u shaqaaleyso qof kale ama aad korto xisaabtaada. Tani waxay ka dhigtaa waqti qiimo leh maalintaada, taas oo kuu ogolaaneysa inaad diirada saarto hadafyada shirkadaha muhiimka ah.
Waxaad rabtaa inaad ku dhisto waxyaabahan soo socda meelaha kale ee warbaahinta bulshada
Facebook ayaa Instagram dib ugu soo celisay 2012. Markii labadii shirkadood ay midoobeen, naqshaduhu waxay suurageliyeen in ay u diraan Facebook, Twitter, iyo Tumblr midigta Instagram-gaaga! Xitaa waad beddeli kartaa goobahaaga si aad si toos ah ugu dirto Facebook mar kasta oo aad ku dhejiso Instagram. Sababtoo ah sida Facebook iyo Instagram u shaqeeyaan, fursadaha waa haddii aad caan ku tahay Instagram, ma noqon doonto mudo dheer ka hor inta aadan ka faa'iideysan Facebook sidoo kale. Iibsashada Instagram followers ayaa sare u qaadaya caankiina waxaadna ku siinaysaa fursad wanaagsan oo aad ku noqotid caan ah goobaha kale.
Waxaad u baahan tahay faallooyin wanaagsan
Dib u eegista goobaha sida Yelp, Ganacsiga Google, iyo La-taliyaha Safarka maahan meel keliya oo ay macaamiishu ka bixi karaan fikradahooda. Instagram xisaabtan badan oo ka mid ah taageerayaasha ayaa ah nooca sida professor Yelp ee ganacsi iyada oo la socdo dib u eegis wanaagsan. Ka dib oo dhan, dadka raacay boggaaga ayaa saxiixay si ay u arkaan content, iyo sidaa darteed alaabtaada, warkooda maalin kasta. Khilaafku waa, waxay u maleynayaan inay aad u fiican tahay ganacsigaaga! Marka ay macaamiishu ka arki karaan tiro badan oo taageerayaal ah iyo kaqeybgalka sare ee posts, saameyntu waxay la mid tahay sidii aad u aragto badanaa dib u eegis wanaagsan. Helitaanka taageerayaasha waxay ka dhigtaa alaabtaada iyo adeegyadiinna inay u muuqdaan kuwo tayo sare leh macaamiisha waxayna u adeegaan si ay u hagaajiyaan qiimeyntaada tartankaaga.
Waxaad dooneysaa inaad sameyso lacag badan!
Warbaahinta bulshada ayaa noqotay qayb muhiim ah oo ah istaraatijiyad kasta oo suuq-geyn ah. Sababta aad u qaadatay wakhti aad ku sameysid profilesaal kala duwan ayaa fudud, waxaad dooneysaa inaad kordhiso faa'iidada ganacsigaaga. Qof kasta oo isticmaala milkiilaha Instagram ee 1 waa macaamiisha mustaqbalka. Laakiin, sababtoo ah qaabka Instagrah, waxay noqon kartaa mid aad u adag in la arko xataa xitaa jajabka macaamiishaas. Iibsashada Instagram followers ayaa si deg deg ah u kordhiya tirada dadka ee soo arkaya alaabtaada. Dad badan ayaa arkaya alaabtaada, waxay u badan tahay in ay dadku iibsan doonaan alaabtaada, kordhinta iibkaaga, iyo ka caawinta qadka hoose ee shirkaddaada.
Weli ma ka fekertaa haddii iibsashada ama helitaanka adeegyo bilaash ah ay kugu habboon yihiin?
Maalin kasta ganacsiyo badan ayaa ku biira Instagram si ay ugu xayeysiiyaan alaabtooda macaamiishooda. Tani waxay la macno tahay, tartanku kaliya wuu sii weynaanayaa, wayna sii adkaanaysaa in la hubiyo in codka shirkaddaada la maqlo. Markaad doorato inaad iibsato taageerayaasha Instagram, waxaad isla markiiba kor u qaadaysaa dadaalka suuqgeyn ee ganacsigaaga, oo aad u samaynayso joogitaanka astaantaada. Waxaad waqti ku badbaadisaa maalintaada shaqada, waxaad kasbatay sumcadda dhagaystayaashaada, oo ugu dambeyntii, waxaad u heshaa lacag badan ganacsigaaga.
Iibsashada kuwa raacsan waa mid ka mid ah siraha suuq-geynta ee sida wanaagsan loo xafido waana hab qiimo leh oo wax ku ool ah oo lagu ogaanayo ganacsigaaga baraha bulshada.
Ma doonaysaa inaad gaadho dadwayne badan oo aad kobciso akoonkaaga Instagram-ka? Ka hel taageerayaasha Instagram bilaash ah naga, Mr. Insta, ama iibso xirmo hawlgelinta maanta!
Miyaad qabtaa wax su'aalo ah oo ku saabsan howlaheena? Waa kuwan su'aalaha inta badan la isweydiiyo:
Maxaan ugu baahanahay taageerayaasha Instagram-ka bilaashka ah?
Dhammaanteen waan ognahay in haysashada taageerayaal badan oo Instagram ah ay faa'iidooyin badan u leedahay akoonkaaga Instagram. Markaad hesho taageerayaal badan, waxaad u badan tahay inaad hesho jacayl badan, faallooyin badan, iyo aragtiyo badan. Tani run ahaantii waxay caawisaa kuwa isku dayaya inay nolol sameeyaan ama helaan soo-gaadhis iyagoo isticmaalaya Instagram.
Sannado ka dib markii aan ahaa hoggaamiyeyaasha warshadaha "Free Instagram Followers", waxaan sameynay nidaam 100% bilaash ah isticmaalayaasha si ay u helaan taageerayaal badan oo Instagram ah maalin kasta. Waa kuwo tayo sare leh oo lagu beegsanayo danahaaga. Waxa kaliya ee aad u baahan tahay inaad sameyso waa inaad ku xirto dhowr akoon oo Instagram ah oo adiga kugu soo jiidanaya!
Waa go'aan sahlan in la isticmaalo Mr. Insta. Uma baahnid inaad buuxiso wax sahan ah ama aad bixiso xog shakhsi ah. Waxa ugu fiican, waxaad isticmaali kartaa adeegeena bilaashka ah tiro aan xadidnayn oo jeer ah! Tani waxay ka dhigan tahay inaad heli karto taageerayaal badan maalin kasta, ilaa iyo inta aad rabto inaad sii korodho.
Ma aaminbaa in la adeegsado adeeggaaga bilaashka ah?
Waxaa si cad loo cadeeyay in adeegsadayaasha la wadaago adeegsigooda adeegsigooda iyo erayga sirta ah bogagga saddexaad / barnaamijyada barnaamijyada kale ee qatar geliya akoonkooda. Sida laga soo xigtay Instagram,
"Haddii aad siiso abkaan macluumaadkaaga gelitaanka, ha ahaato calaamad gelid ama adoo siinaya isticmaalekaaga iyo eraygaaga sirta ah, waxay si buuxda u heli karaan akoonkaaga. Waxay arki karaan fariimahaaga khaaska ah, waxay heli karaan macluumaadka ku saabsan asxaabtaada, waxayna ku dhejin karaan spam ama waxyaabo kale oo waxyeelo leh astaantaada. Tani waxay khatar gelinaysaa ammaankaaga, iyo ammaanka saaxiibbadaa."
Waxaad ogaan doontaa markaad abuureyso akoonkaaga bilaashka ah, Uma baahnid wax galitaanka astaantaada Instagram. Marnaba ma waydiisanno eraygaaga sirta ah waxaanan kugula talinaynaa inaadan bixin tan, waligaa! Waxaan kaaga baahanahay inaad bixiso magacaaga isticmaale ee Instagram. Tan waxaa loo baahan yahay si aan u ogaano akoonka loo diro taageerayaasha.
Mr. Insta waxa uu keenayay taageerayaal bilaash ah ilaa 2013. Runtii, waxaanu nahay hormuudka bixinta adeegyadan. Waxaad ogaan doontaa in adeegyo badan ay soo baxeen iyagoo sheeganaya inay bixiyaan taageerayaal bilaash ah, laakiin badanaa waxay u baahan yihiin macluumaadka akoonkaaga, ama inaad dhammaystirto hawl adag oo aan u qalmin. Sanadihii la soo dhaafay, waligeen lama mamnuucin akoon Instagram-ka ah. Waxaan si joogto ah dib u eegis updates ay sameeyeen Instagram oo aan hagaajinno hababka gaarsiinta our si waafaqsan.
Kuwani taageerayaasha Instagram ma dhabbaa?
Waxaan dhab ahaantii siinaa taageerayaasha dhabta ah macaamiisheena lacag bixinta, si ka duwan 98% ee mareegaha halkaas ka jira. Inta badan shabakadaha kale waxay sheeganayaan inay bixiyaan adeeggan bilaashka ah, laakiin ma bixiyaan!
Waxaan awoodnaa inaan bixino adeeggan bilaashka ah sababtoo ah taageere kasta oo lagu kasbado addeegga follow4follow waa isticmaale kale oo la mid ah adiga.
Adeegeenu waa bulsho u ogalaata dadka maskaxda leh inay is helaan oo isku xidhmaan. Waxaan nahay kaliya dhexdhexaadiyaha.
Ha ku kadsoomin bogagga sheeganaya inay bixiyaan taageerayaal dhab ah. Had iyo jeer waxaa la sheegaa in haddii ay u muuqato mid aad u wanaagsan inay run noqoto, waxay u badan tahay inay… iyo inay si buuxda u noqoto mid hufan, waa inaan ogaano in tayada taageerayaashu ay kala duwanaan doonaan. Tani waa sababta oo ah dadka qaar ayaa si fudud u geliya xisaabaadkooda dadaal badan marka loo eego kuwa kale. Tani waa isku mid in laga sheego Instagram guud ahaan. Markaa, ha ka welwelin haddii hal daqiiqo ay ku raacdo calaamad aad u fiican oo daqiiqadda xigta qof caadi ah oo dhowr sawir leh uu sameeyo.
Iyadoo aan loo eegin tirada taageerayaasha ee dhamaantood laguu soo diro, waxaa lagu doortay danaha la midka ah ee aad dooratay markaad saxiixday adeeggayaga.
Sideen u ilaaliyaa boggayga Instagram?
Waxaa muhiim ah in la ogaado in ay shaqadeena tahay in aan dad cusub ku gaarsiino boggaga Instagram-ka lacag la'aan. Waa shaqadaada inaad ku hayso halkaas. Daraasaduhu waxay muujinayaan in haddii boggaagu aanu lahayn wax badan ama uusan si joogto ah u bixinin wax cusub oo soo jiidasho leh tirooyinkaagu way dhici doonaan.
Waxaan isku daynaa intii karaankeena ah inaan siinno dadka danaha la midka ah. Tani waxay ka dhigan tahay in aad u malaynayso in boggaagu uu bixinayo macluumaad ku saabsan danaha aad dooratay ka hor inta aanad kicin qorshe lacag la'aan ah ama lacag la'aan ah waxaad u badan tahay inaad ilaaliso oo aad koraan boggaaga. Khubarada ayaa soo jeedinaya in dhajinta tayada tayada leh 1-3 jeer maalintii ay u muuqato inay soo jiidato natiijooyinka ugu fiican. Waa muhiim inaad waqti ku qaadato qoraalladaada. Hubi in sawiradu/fidiyayaashu ay tayadoodu sarreyso oo ay la xidhiidhaan dulucda Instagram kaaga.
Ugu dambeyntii, hubi inaad la falgasho dhagaystayaashaada. Haddii ay faallo ka bixiyaan qoraalladaada hubi inaad u jawaabto. Sidoo kale ka fiirso inaad booqato boggooda oo aad siiso like ama laba. Way socon doontaa marka ay timaado abuurista cilaaqaad wakhti dheer ah boggaaga.
Muddo intee le'eg ayay qaadataa in la helo adeegyada bilaashka ah?
Markaad si guul leh u kiciso qorshaha bilaashka ah, waxaad caadi ahaan bilaabi doontaa inaad aragto dad cusub oo bilaabaya inay raacaan astaantaada 5 daqiiqo gudahood. Maadaama aad hesho taageerayaal dhab ah oo firfircoon, kuma soo galaan dhammaan hal mar. Maadaama qorshahaagu socdo 48 saacadood ee soo socda, waxaad si aan kala sooc lahayn u heli doontaa ka hor inta aanu qorshuhu dhicin. Halkaa marka ay marayso, waad soo noqon kartaa oo dib u kicin kartaa.
Ku gaarsiinta qaab dabiici ah iyo qaab dabiici ah oo dhab ah oo dheer iyo korriin waara waxay caawisaa hubinta badbaadada akoonkaaga Instagram. Ma jiro adeeg kale oo ka jira internetka oo ka dhigaya daryeelkan badan bixinta adeegyadooda bilaashka ah. Runtii waanu danaynaynaa xubin kasta oo bulshadeena ah sababtoo ah la'aantaa ma shaqaynayso.
Muxuu adeegani bilaash u yahay?
Waa waxa aan had iyo jeer samaynaynay! Waxaan nahay koox dad ah oo jecel inay la yimaadaan qalab aad u fiican oo qof kastaa isticmaali karo, iyada oo aan loo eegin cidda aad tahay iyo meesha aad ka joogto adduunka. Ma jirto goob kale oo kobcinta Baraha Bulshada oo run ahaantii odhan karta tan.
Tan iyo bilowgii 2013, markii aan bilownay ma aysan dheerayn ka hor inta dhammaan goobaha kale ay bilaabeen inay nuqul ka sameeyaan adeegyadayada. Si kastaba ha ahaatee, waxay ku dhaceen siyaabo badan. Runtii ma daneeyaan isticmaalayaashooda xorta ah. Tan waxa lagu muujiyay akhrinta faallooyinkooda taban ee aan la tirin karin ee internetka.
Taasi anaga maaha! Waxaan fahamsanahay muhiimada ay leedahay in bogga Instagram laga saaro dhulka. Waa shaqo adag oo waayadan waxa is-daba-joog ah adiga.
Taasi waa sababta aan had iyo jeer ku dadaali doono inaan bixinno qiimo dhab ah haddii aad adeeg naga soo iibsato iyo haddii kale. Waxaan kaliya rabnaa inaan kaa caawinno dhisidda iyo yaa yaqaan, laga yaabee inaad jidka ku sii jirto inaad isku daydo mid ka mid ah adeegyadayada kale. Haddii aadan samayn, taasi sidoo kale waa caadi! Waxaan tan ku cadeyneynaa annagoo ku ogolaanayna inaad shaqeysiiso laba jeer 48-kii saacba waana bilaash waligeed!
Sideen lacag uga sameeyaa barta Instagram-ka?
Waxaa jira siyaabo badan oo aad dakhli ku samayn karto adoo isticmaalaya Instagram. Tani waxay ku bilaabataa bog wanaagsan. Boggan weyn waa inuu lahaadaa waxyaabo tayo sare leh oo loogu talagalay dhageystayaal gaar ah. Waxaa hubaal ah, tani waa tallaabada ugu muhiimsan ee lacag looga samaynayo Instagram.
Hadda, waxaad bilaabi kartaa inaad dhisto kuwa soo socda. Adeegyadayada bilaashka ah waxay ka caawiyaan xisaabaadyo badan inay tan ku sameeyaan dadaal aad u yar. Waxaan gaarsiinaa isticmaalayaasha la beegsaday iyadoo lagu salaynayo doorashada aad sameyso marka aad koonto sameysato. Markaad dhisto saldhig taageere oo weyn, waxaad la xiriiri kartaa milkiilayaasha ganacsiga / summadadaha iwm si ay u soo bandhigaan badeecadooda ama adeeggooda lacag.
Waxaa jira xitaa shabakado aad isticmaali karto si ay kuugu xiraan shirkadda saxda ah ee akoonkaaga Instagram. Dad badan oo adduunka ah ayaa tan sameeya.
Maxaa dhacaya haddii aan u baahdo inaan kula soo xiriiro akoontadayda?
Tani waa meesha aan runtii iftiimineyno! Mr. Insta WUXUU kuugu soo jawaabi doonaa 24-48 saacadood gudahooda! Si kasta oo uu u weyn yahay ama u yar yahay codsigu. Caadi ahaan waxaad jawaab ku heli doontaa in ka yar 48 saacadood laakiin si aad u noqoto dhinaca nabdoon maadaama xilliyada qaar ay ka mashquul badan yihiin kuwa kale ma rabno inaan ballan qaadno wax aynaan bixin karin.
Ha na rumaysan? Isku day oo kaliya fariin noogu soo dir. Xitaa haddii aad rabto inaad tiraahdo "hi" oo aan ogaano fikradahaaga ku saabsan adeegga. Waxaad arki doontaa adeegga la socda iyadoo la adeegsanayo goobta ugu fiican ee internetka ee adeegyada Instagram ee bilaashka ah.
Isbeddellada xun ee Instagram waa inaadan raacin 2022
Marka aad ka fikirto madal warbaahinta bulshada ee ugu caansan adduunka, magaca ugu horreeya ee maskaxda ku soo dhaca waa Instagram. Sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay Statista, madalku waxa ay urursatay in ka badan 1.4 bilyan...
Immisa Tags ayay tahay inaad ku isticmaasho Instagram?
Talooyin & Khiyaamo lagu joojinayo Isbaaska ka faallooda Qoraalladaada Instagram-ka
Waxaan Bixineynaa Adeegyo Suuqgeyn Dheeraad ah oo Instagram ah
Adeegyada Instagram Adeegyada Twitter Adeegyada Twitch Adeegyada Pinterest Adeegyada YouTube Adeegyada Spotify Adeegyada SoundCloud
Cilmi baarista Hashtags Followers jecel yahay IGTV Likes Muuqaalka Reels Dareeno & Gaaritaan Aragtida IGTV Comments
Macaamiishan Views jecel yahay Comments La soco Saacadaha saamiyada
Ka iibso Bogga Iskaashigayada
Halkan Mr. Insta, waxaanu ku faanaa adeeg gaar ah iyo qiimo jaban. Kaliya ha u qaadan ereygayaga - ka eeg faallooyinka macaamiishayada hoos.
Runtii waa yaab! 100% degdeg ah oo bilaash ah oo sharci ah! Ma rumaysan karo inta raacsan ee aan kasbaday mahadsanid mr insta waa meeshii aad tagi lahayd Aad u jeclaatay! Taasi waa codsi cajiib ah! Taasi waa sahlan tahay in la isticmaalo oo si degdeg ah u dhaqsaha badan ee dadka raacsan Instagram kaaga.
Mr. Insta wuxuu caawiyay kor u qaadida taageerayaashayda maalmo yar gudahood. Qof kasta oo raba inuu isla markiiba kordhiyo taageerayaashiisa markaa tani waxay mudan tahay in la hubiyo
Aad ayaan ugu qanacsanahay iyaga. Sida ugu fiican ee ganacsiga. Laba habeen gudahood taageerayaashaydu waxay ka tageen 200 ilaa 598 n tirinta wakhti ha lumin
Mareeg cajiib ah oo aad tagi karto haddii aad u baahan tahay in lagaa caawiyo inaad bog ka samaysato goob kasta oo warbaahinta bulshada ah. Waxayna ku siinaysaa taageerayaasha bilaashka ah! Tag hadda soo qabso!
Runtii degdeg bay ahayd oo fududahay in la isticmaalo. Waxaan arkay natiijooyin toos ah, oo wata taageerayaasha isla markii aan raacay toban bog, oo aad ka dooran karto.
Goob weyn iyo, muhiimad ahaan, waa bilaash, waxaad u isticmaali kartaa inaad kordhiso ku habboonaanta boggaaga shakhsi ahaaneed adoon luminin dinaar.
- Caawo T.
Goobtani waxay ku fiican tahay kuwa raacsan iyo kuwa jecel sababtoo ah waxaad ka heli kartaa waxyaabo badan oo dhammaan waxyaaluhu run ahaantii way shaqeeyaan!
Waxay na siiyaan taageerayaasha instagram-ka bilaashka ah boqolkiiba 100 waa sharci aan tagno aad ayaan ugu mahadcelinayaa hadda aad ayaan caan u ahay
Cajiib aad u faa'iido badan oo aad u isticmaal !!!
Tani waxay si fiican u shaqeysaa! 100% Isku day in aan haysto xidhmo sahaminta bogag marar badan ka dib markaan dhajiyo waxyaabaha la jecel yahay dartiis!
무료로 팔로워 얻을 수 있어서 손실이 있긴 하지만
Mr. Insta waa ku fiican yahay haddii aad rabto inaad bilowdo kor u qaadida akoonkaaga instagram, waxay ku siin doontaa taageerayaal tayo leh oo adduunka oo dhan ah. Waa tillaabada ugu horreysa marka aad hesho tiro joogto ah oo raacsan oo laga helo Mr Insta waxaad bilaabi doontaa inaad yeelato muuqaal soo jiidasho leh oo u horseedi doona taageerayaal cusub oo dabiici ah. Meesha ugu fiican ee laga bilaabo
Helay taageerayaasha n jecel yihiin mahadsanid! Pls ha joojin oo waxaan rajeynayaa inaan sidoo kale wax badan helo.! Aad baan u jeclahay
- jiinis k.
Goobta cajiibka ah si aad u hesho kobaca Insta ee bilaashka ah waxaa jira qaar gaagaaban oo yimaada sida waqti badan ayay qaadataa laakiin wali waa goob fiican
Way shaqeysaa! Kadib waxay ku siinayaan waxyaabo badan oo bilaash ah oo jecel inaad awood u yeelatid inaad wax dhisto ka hor intaadan bixin wax lacag ah.
Waxay bixisaa taageere bilaash ah iyo sidoo kale adeegyo lacag leh oo sharci ah
Aad bay iigu wanaagsan tahay waxaad heli kartaa taageerayaal badan xitaa bilaasha waa mid faa'iido leh oo la isku halleyn karo kaliya waxaan ku talin karaa
Codsiga ugu fiican abid
Runtii aad bay waxtar u leedahay oo waxay ku siinaysaa taageerayaasha dhabta ah ee Instagram-ka waxaan ku qiimeeyaa 5 xiddigood sababtoo ah shaqadooda cajiibka ah ee u ogolaatay inay yeeshaan taageerayaal markasta oo aad rabto
- Cod leh M.
Website-kani waxa uu u soo bandhigayaa sidii ballanku ahaa. Waxaan kula talinayaa kuwa doonaya taageerayaal badan. Interface-ka si fiican loo nashqadeeyay waxa uu sahlayaa in laga helo waxa aad ka raadinayso mareegaha!
Aad ayaan ugu faraxsanahay in aan dib u eego sida website cajiib ah, halkan waxaad ka heli kartaa jecel iyo taageerayaasha lacag la'aan ah iyo adeegyada premium waa wax cajiib ah! Waad jeclaan lahayd.
Waxay iga caawisaa in aan ku koro Instagram-ka aniga oo la wadaaga akoonkayga dadka kale kana dhigaya inay raacaan si ay iyaguna u koraan
- koley E.
Websaydhku wuxuu caawiyay inaan bilaabo boggayga warbaahinta bulshada. Waxay ahayd bilaash oo aan dhib lahayn, sidoo kale ma jirin dhibaatooyin amni, taas oo sii wanaajisay. Waxaan jeclaan lahaa inaan kugula taliyo bogag kasta oo akoon ah oo cusub inay maraan mareegahaaga.
Ma rabtaa bilaash, tayo sare iyo bartilmaameedka Instagram maalinlaha?
Kusoo hel kuwa raacsan bogga Instagram ee bilaashka ah, tayo sarena leh bartilmaameedyo dhowr ah riix shirkada aaminka ah ee internetka ee adeegyada suuqgeynta Instagram. [emailka waa la ilaaliyay] USA & CAN: 888-881-9070
Xuquuqda daabacaadda © 2022 Mr. Insta (mrinsta.com). All Rights Reserved. Khariidadda bogga
Talooyin si aad dad badan uga jawaabto su'aasha sheekadaada